Hadaba waa kuma Fidel Castro – The Voice of Northeastern Kenya
Hadaba waa kuma Fidel Castro
Fidel Alejandro Castro Ruz waxa uu dhashay 13-kii bishii Agoosto ee sanadkii 1926, waxa uuna ka soo jeedaa qoys beeraley maalqabeen ah oo ka soo haajiray dalka Spain.
Hooyadii Lina Ruz González waxaa addoonsi u haystay aabihii oo ay uga shaqayn jirtay beertiisa kaddibna waxa ay noqotay xaaskiisa kaddib markii ay dhashay Fidel Castro.
Hogaamiyahan ayaa waxbarashadiisa waxaa uu ka bilaabay mid kamid ah schoolada Katooliga ee masiixiga balse markii dambe ayuu dhaxda ooga tagay waxbrashadiisa.
Xili uu dhiganayay Jaamacada Havana bartamihii 1940-meeyadi waxaa uu Castro bilaabay in uu u ololeeyo arimaha siyaasada isagoo markii dambe noqday aftahan.
Fidel Casri wuxuu dalkaasi xukumayay muddo 50 sano ah, ka dib markii uu afgabiyay kaligii taliyihii Fulgencio Batista sanadkii 1959kii, wuxuuna dalkaasi ku xukumayay nidaamkii shuuciga ahaa
Sanadkii 1961 ayaa Mareykanka waxa uu damcay in uu afgambiyo dowladda Castro basle arrintaasi ayaa guul darro ku dahmaatay.
← Kumanaan kun oo qof oo maanta dibadbaxyo horleh ka dhigaya kuuriyada konfureed
Burcad magaalada Samburu weerar ku qaaday gaari kuwa xamuul qaada ah →